Robotka Ganacsiga • Dahab, Saliid, Forex & Crypto • Tijaabooyin & Faallooyin
Ganacsiga Bots & Cryptobots
Qaabka ganacsiga ee shirkadaha ganacsiga wuxuu siiyaa maalgashadayaasha fursad ay kaga qeyb galaan suuqyada maaliyadeed ee lacagaha, badeecadaha, biraha qaaliga ah iyo cryptocurrencies. Iyadoo aaladaha ganacsiga la soo bandhigo, uma baahnid wax khibrad ah ama xirfado ah xagga maaliyadda ama horumarinta IT-ga. Marka algorithms-yada ganacsiga ha u daryeelaan raasamaalkaaga si caqli iyo taxaddar leh, taas ayaan ku dooranay.
Si naxariis leh, waan ku hagi doonaa oo ka jawaabi doonaa su'aalahaaga, laakiin maskaxda ku hay in khatarta khasaaruhu ay muhiim u tahay sida faa'iidooyinka la ururiyey. Kaliya maalgeli inta aad diyaar u tahay inaad lumiso. Ku bilow oo tijaabi robots-yada la soo jeediyay oo leh raasumaal bilawga yar si aad u fahanto xeeladooda.
Abuur dakhli dadban oo otomaatig ah adoo si caqligal ah u maalgashanaya.
Ku dhowaad waxba in la sameeyo!
Saxiix, dhig lacagtaada oo aalado ha kuu ganacsadaan.
Dakhliga joogtada ah
Ururi dakhligaaga si joogto ah iyo dhammaan lacagahaaga waqti kasta.
Robots ka ganacsiga iyo fursadaha dhaqaale
Robotyada ganacsiga ayaa la tijaabiyay dhowr bilood, lagu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah
Tan iyo markii ganacsigu uu joojiyay inuu ahaado awoodda khubarada, robots ganacsigu waxay ku soo duuleen internetka waxayna dhalin karaan faa'iidooyin dhaqaale shakhsiyaadka. Robots-yadani waxay caan ku noqdeen ganacsiga si toos ah, iyaga oo ka wakiil ah isticmaalayaashooda, iyaga oo badbaadinaya waqti qiimo leh. Maaddaama ay jiraan khiyaamo badan oo ku saabsan mawduuca, waxaan tijaabineynaa, falanqeyneynaa oo aan kula talineynaa qaar ka mid ah bots-yada ganacsiga in ka badan kuwa kale.
Robot lagu kalsoonaan karo
Waxaa loogu talagalay in lagu ganacsado lammaanaha XAU / USD oo leh maareyn khatar yar iyo istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo muddo gaaban ah. Is xoqidda loogu talagalay suuqa dahabka.
Loogu talagalay in lagu ganacsado suuqa cryptocurrency iyo inta badan Bitecoin BTC oo leh isbeddel suuqeed aad u sarreeya.
AutoTrade Forex waa suuq ganacsi oo Indonesia ah oo ku saleysan robot ganacsi. Autotrade Forex waxaa la heli doonaa inta lagu jiro xagaaga 2021.
Waxaa loogu talagalay in lagu ganacsado suuqa saliidda. Saliida Autotrade waxay ujeedkeedu tahay inay sharadto ama hoos udhacdo waxay kuxirantahay qiimaha foostada saliida ah.
Robot la joojiyay
Fin 888 waa robot ganacsi oo Indonesian ah oo ku saleysan ganacsiga lacagta fiat. Fin888 wuxuu ahaa robot xasiloon laakiin ka tayo yarAutotrade Gold.
Nidaamka deegaanka ee 18 robots oo ay ku jiraan 2 ee crypto ku xiran API Binance. Bots-yada kale waxa lagu xidhidhi doonaa broker Sinaanta la habeeyey.
Loogu talagalay in lagu ganacsado lammaanaha EUR / USD, qaabka aasaasiga ah ee hawlgalka SmartXBot waxay ku salaysan tahay isbeddelka iyo ganacsiga jagooyinka gaaban. Ka tayo yar ATG.
Robots la isku halayn karo
Mid ka mid ah is-weydaarsiga ugu wanaagsan wuxuu bixiyaa 4 xeelado robot ah iyadoo loo eegayo lamaanaha lacagta la rabo.
Waxay u muuqataa ok
Habka iibsashada dahabka iyo dheemanka oo lagu bixiyo lacagta Fiat, wareejinta ama crypto.
Robot-ka ganacsiga Indonesia oo ka ganacsanaya suuqa dahabka. Nidaamka wadaagga faa'iidada sida Smartxbot.
Robot ganacsi Indonesian ah oo ka ganacsanaya suuqa crypto broker Lotus International.
Robot-ganacsiyeed ku salaysan suuqa sarifka calamiga ah.
Si looga fogaado
Loogu talagalay in lagu ganacsado lammaanaha EUR / USD, Coved waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu daro sirdoonka macmalka ah iyo mid ka mid ah teknoolojiyada maareynta halista ugu horumarsan.
Waxaa loogu talagalay in lagu ganacsado lammaanaha EUR / USD oo leh maareyn khatar yar iyo istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo muddo gaaban ah.
Elitrob waxaa loogu talagalay in lagu ganacsado labo lacag oo kala duwan, Elitrob wuxuu si joogto ah u falanqeeyaa suuqa Forex, isagoo raadinaya heerar hay'adeed oo muhiim ah iyo aagag leh ixtimaal ganacsi oo sareeya.
Waxaa loogu talagalay in lagu ganacsado laba nooc oo lacag ah isla markaana loo adeegsado istiraatiijiyad ganacsi iyo maalin ganacsi.
❌ Waxoogaa Robot
Nidaamka lacag celinta ee ku saleysan xayeysiinta.
Marketing Suuqgeynta AI
Aan lagaran karin
Soo hel aalado 3 aalado ah oo ku takhasusay qurxinta iyo ganacsiga maalinlaha ah oo ay kormeerayaan 12 ganacsato xirfadlayaal ah oo ku ganacsanaya lacagaha ugu waaweyn ee lacageed.
Casriyeynta iyo La-socodka Robot-yada ganacsiga qaarkood
Qaar baan xisaabinnaa bots ganacsi kuwo kalena nooma muuqdaan kuwo la isku halayn karo oo la sii wadi karo muddo ka dib. Halkan waxaa ah liis aan dhammaanayn oo ah robots ganacsi oo aan si dhow ula socono: Smart Evo, Maestrem, GoldMine, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Ka fogow robots-ganacsigan (Scams / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Xitaa ganacsatada ugu fiican waxay ku tiirsan yihiin aalado si ay u kiciyaan amarradooda suuqyada.
Way ka dheereeyaan, dhaqso u xisaabiyaan, waana ka madhan yihiin shucuurta.
Aalado ganacsi oo otomaatig ah ayaa ah nidaamyo otomaatig ah oo ku shaqeeya si ku saleysan xuduudaha ama jadwalka ay dejiyeen kooxohooda ganacsatada ah. Markaad kuxirato koontadaada ganacsiga, robotku wuxuu si otomaatig ah uqaadan doonaa boosaska suuqyada maaliyadeed isagoon wax faragalin ah aadane ah, taas oo meesha ka saaraysa khaladaadka ay sababaan shucuurta aadanaha.
Barnaamijyadan waxaa loogu talagalay iyada oo ujeedadu tahay in otomaatig laga dhigo geedi socodka ganacsiga iyo in la gaaro faa'iido waara, iyadoo leh saamiga halista / soo celinta wanaagsan. Nidaamyadan algorithms ee horumarsan oo ay weheliso sirdoon macmal ah ayaa si joogto ah u falanqeynaya suuqa, si toos ah u furaya una xiraya ganacsiyo leh maareyn maaliyadeed oo wanaagsan (ugu badnaan 3%), iyadoo la adeegsanayo tilmaamaha ku saleysan tilmaamayaasha xisaabta, tirakoobka iyo gaar ahaaneed. haystaha deeqda waxbarasho
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, sida Meta Capital waxay horumarisay iskaashi dhowr ah oo ay la leedahay khabiiro kala duwan oo ku saabsan ganacsiga tooska ah.
Robot kastaa wuxuu leeyahay istaraatijiyad ganacsi oo u gaar ah oo ku xidhan suuqa la beegsanayo. Si joogto ah ayaa loola socdaa, loo cusboonaysiiyaa iyadoo loo eegayo wararka dhaqaalaha oo ay hagaajiyaan koox ganacsato xirfadlayaal ah.
Habkan wanaajinta joogtada ah waa lama huraan si loo xaqiijiyo natiijooyin guul leh oo mustaqbalka fog ah. Suuqa sarifka calamiga ah waa deegaan aad u dareere ah oo si joogto ah isu bedelaya. Heerkan wanaajinta waxay hubisaa in algorithms-yadu ay ku sii jiraan meesha ugu sarreysa wax walbana waxay u shaqeeyaan sidii ay ahayd.
"Haddii aad ku cusub tahay adduunka ganacsiga robotyada, qaado taladayda: sharad lacagta aadan u baahnayn, u oggolow ganacsadaha inuu markaas uruuriyo faa'iidooyinkaaga illaa intaad ka helayso sharadkaagii ugu horreeyay. Intaas ka dib, kaliya Gunno. "
Istaraatijiyad dhaqaale oo shaqsiyeed
Robot / Crypto / Sargaal.
Waa kan mid ka mid ah xeeladaha maalgelinta ee lagu dhalinayo dakhli dadban iyadoo la kala beddelayo ilaa ugu badnaan:
Adeegso hal ama in kabadan aalado ganacsi adoo ku shubaya lacagaha brokers marka loo eego
Iyada oo guulaha la soo saaray, ku iibso cryptocurrencies isweydaarsiyada waaweyn (Binance, Coinbase ama Crypto.com).
Ka ganacsan ama hay kaaga cryptomonnaies si aad bil kasta u abuurto xiiso iyo/ama aad u iibsato alaab iyo adeegyo maalinle ah crypto-kaaga sida Binance Card iibsashada cuntada, timo-jaraha, batroolka, rukunka iyo wakhtiga firaaqada...
Aalado ganacsi oo deggan oo hufan
Maal gasho oo kaladuwan
Waxbadan ka baro aalado ganacsi
4 su'aalood / jawaabo
Maxaad ugu ballaadhinaysaa maalgashigaaga robot ganacsi?
Maalgelinta robot ganacsi waa qaab sii kordheysa oo caan ah oo caddeyn kara inuu yahay mid faa'iido badan leh. Sidaa darteed, ganacsiga isdabajoogga sare wuxuu ka dhigan yahay ku dhowaad kalabar amarrada lagu soo rogay Faransiiska iyo 70% ee amarrada lagu soo rogay Mareykanka. Tirooyinkani waxay si cad u muujinayaan waxtarka noocan ah maalgashiga maaliyadeed.
Faa'iidooyin dhowr ah ayaa lagu xusi karaa aalado ganacsi:
- ugu horreyntii, waxay suurtogal ka dhigtaa in ay soo saaraan qiimeyn wanaagsan oo hantida, qiimuhu si joogto ah ula qabsado baahida suuqa.
- suuqa wuxuu noqdaa mid dareere badan, si sahlan wax loo iibsado loona iibiyo
- waxay yareeyaan kharashaadka ganacsiga ee shirkadaha iyo shakhsiyaadka labadaba
Waa maxay noocyada dadka aadka u xiiseynaya ka ganacsiga robotyada maanta?
Maanta, waxaa jira dhowr nooc oo maalgashadayaasha khatarta ah oo isticmaala robots ganacsi oo toos ah:
Dadka doonaya in ay kala duwanaadaan ilahooda dhaqaale
Shakhsiyaad aad u tiro badan ayaa raba inay ku lug yeeshaan ganacsi si ay u abuuraan dakhli dheeraad ah. Robots-ka-ganacsigu waa beddelaad aad u wanaagsan kiiskan sababtoo ah waxay kuu oggolaanayaan inaad maalgeliso suuqyada maaliyadeed adigoon haysan xirfado badan sida ganacsatada xirfadlayaasha ah.
Ganacsatada xirfadleyda ah
Waxaan ka helnaa tiro sii kordheysa oo ganacsato ah oo adeegsada aalado ganacsi, sida ay tahay dhacdooyinka ku saabsan robotyada aan kuugu soo bandhigo bogga hadda jira. Xaqiiqdii, ganacsiga otomaatigga ah wuxuu u baahan yahay shaqo ka yar inta loo oggolaanayo inuu soo saaro dakhli la taaban karo Ganacsatada ayaa wali ka taxaddaraya inay doortaan aalado ganacsi oo tayo leh oo bixiya calaamado faa'iido iyo fikir leh.
Jaangooyooyinka maalgashiga maaliyadeed
Maalgashadayaashu waxay si joogto ah u raadinayaan fursado ay ku kala duwan yihiin caasimaddooda. Robotyada ganacsigu waa farsamo soo jiidata noocan ah astaanta. Xaqiiqdii, markay maal-gashadayaashani la kulmaan aalado wanaagsan, kama waaban inay maalgashadaan lacag fara badan.
Maxaan ugu bixinayaa gargaarkayga bilaash?
Hadafkeygu waa inaan kugu taageero diiwaangelinta aaladaha la soo bandhigay. Iyada oo loo marayo degelkeyga, waxaan kaliya ku tusayaa aalado ganacsi oo aan falanqeeyay toddobaadyo badan oo badan. Dabcan, had iyo jeer khatar baa jirta maxaa yeelay, aan xusuusnaano, aalado ganacsi oo kasta ayaa weli ah maalgashi khatar ah oo sidaas darteedna dhalin kara khasaare.
Waxaan ku siinayaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad ugu bilowdo ganacsiga otomaatiga ah, daahfurnaan dhammaystiran. Hadafku waa adiga inaad si sax ah u ogaato waxa aad ku soo galayso adigoon la imaanin wax kadis ah oo aan fiicnayn markaad timaado.
Noloshayda oo dhan, marwalba waxaan jeclaa inaan la wadaago si aan ugu oggolaado kuwa igu wareegsan inay horumar sameeyaan. Way la mid tahay barta Robots-Trading.fr. Xaqiiqda fudud ee ah ogaanshaha inaan kaqeyb qaadanayo horumarinta mashruucaaga ayaa aniga igu qanacsan.
Ganacsiga iyo cryptocurrencies waxay noqdeen xamaasad dhab ah tan iyo 2017. Waxaan saacado badan ku qaatay falanqaynta suuqyadan cusub iyo ilaha cusub ee maalgashiga ee ka yimaada iyaga. Hadda, yoolkaygu waa inaan kula wadaago xiisahan si aad ugu raaxaysato.
Noocyada kala duwan ee ganacsiga ee aan hadda ka helno suuqyada
Maanta waxaa jira dhowr nooc oo ah aalado ganacsi. Astaanta aaladahaan rooti waxay ku kala duwan yihiin hadba horumarka suuqa. Sidaa darteed, suuqyada qaar waa kuwo xasilloon halka kuwa kale ay yeelan doonaan isbeddello muuqda, isbeddel badan.
Robots ganacsi dhexdhexaad ah Trend
Robot-yada ganacsi ee nooca kala duwani waxay si gaar ah diiradda u saaraan suuqyada xasiloon oo aan aad u kacsanayn. Robot-yadan ganacsi waxay ku xidhan yihiin tilmaame farsamo (oo isku xigxiga dhibco u oggolaanaya falanqaynta dammaanadda suuqyada saamiyada si loo saadaaliyo habka uu qiimaha u kobcayo). Robot-ka ganacsiga nooca Range wuxuu si joogto ah u baari doonaa tilmaamayaashan farsamo wuxuuna samayn doonaa wax gadashada iyo iibinta marka suuqa uu noqdo mid si xad dhaaf ah loo iibsado ama loo iibiyo.
Ka ganacsiga robotyada isbeddelka soo socda
Robot-ka noocan ah ayaa hubin doona inuu ogaado isbeddellada lagu soo saaro suuqa iyadoo la furayo jagooyinka raacaya isbeddelka ugu sarreeya. Marka, markasta oo aalado ay ogaadaan isbeddel faa'iido yeelan kara, way furi doontaa ama xidhi doontaa jagooyinka. Ogsoonow inay kaliya tixgelinayso calaamadaha aan ka soo horjeedin isbeddelka.
Aalado Ganacsi oo Joogto ah (THF)
Iyagu waa aalado ganacsi oo tartamaya. Badanaa waxaa abuuray machadyada maaliyadeed. Waxay awoodaan inay ku fuliyaan amarrada ilbiriqsiyo yar gudahood (xoqid). Ujeedada laga leeyahay ganacsiga soo noqnoqda waa in laga faa'iideysto isbeddelada yaryar ee joogtada ah.